Waad indha indheyn kartaa isku ekaanshaha u dhexeeya Afrika iyo Koonfurta Ameerika iyo muhiimadda xukunka boqorrada labada Ta-Mari (Kemet) laakiin qaasatan sharciga qaaska ah ee dadka asaliga ah ee dunida oo dhan markii ay dagaalka joogeen " fikirkooda ah jarida madax mas'uul ah, waxay ahayd isku mid "
Léopold II "muu ahayn xasuuq" halkii uu ka yeeli jiray daanyeer: ninkan caanka ah, ee aad u aragto magaciisa wuxuu ahaa "Léopold louis-Philippe Victor de saxecobourg". Waxaa loo yaqaanay King Leopold II, King of Belgium, Diseembar 17, 1865 - Diseembar 17, 1906 (44 jir): wuxuu dhashay Abriil 9, 1835 Brussels wuxuuna dhintey Disembar 17, 1909 (da 74 jir)
Gandhi quudhsashadii weynayd ee madaw: halkan waa qoraallada cunsuriyadda ee waxa loogu yeero Gandhi, oo ah rasuulka aan rabshaduhu dhicin inuu ku dhufto cinwaannada, meeshii uu ka ahaa qiimahiisii ​​xasilloonida, taas oo kadhigtay halganka hoggaamiyeyaasha madow ee istaagay. waxaa si xoogan u waxyooday isaga
Sannadkii 1966 Marie Van Brittan Brown iyo ninkeeda Albert waxay abuureen nidaam telefishan oo wareegsan oo loogu talagalay kormeerka guriga… Nidaamkan amniga wuxuu hormuud ka ahaa dhammaan teknoolojiyadda amniga guryaha ee horumarsan ee maanta la isticmaalay.
Liibiya: Xukuumadda ayaa ku dhawaaqday furitaanka baaritaan lagu sameeyo falalka 'bini'aadanimada' ah ... kuwani waa been; "Black Africans" kuma dhicin dabinka kuwa kufsi-galayaasha ah, kuwa soo weeraray iyaga ayaa u kaxeeya waddamadaada
Feb24 12: 53